Inona no rakitsoratr'i Brock Lesnar ao amin'ny WrestleMania? - Wwe
Inona no rakitsoratr'i Brock Lesnar ao amin'ny WrestleMania?
# 8 Brock Lesnar vs. Triple H: WrestleMania 29
Triple H vs. Brock Lesnar no lalao WrestleMania voalohany farany taorian'ny niverenany tamin'ny 2012. Ity fifandonana ity dia vokatry ny fifanolanana teo amin'i Lesnar sy i Triple H. Maty teo anelanelan'ireo kintana roa ireo satria tena nandrahona i Lesnar mankany Triple H sy ny fianakaviany.
Nandritra ny fananganana an'i WrestleMania, nanafika an'i Vince McMahon ny The Beast. Vetivety dia lalao No Holds Barred eo amin'i Lesnar sy Triple H no voatokana ho an'ny WrestleMania 29. Ny Triple H koa dia tsy maintsy nametraka ny asany teo amin'ny laharana tamin'ity fifaninanana ity.
Triple H vs Brock Lesnar No Holds Barred, ny asan'ny Triple H eo amin'ny laharana. Wrestlemania 29
- Fazcoasters (@Fazcoasters) 1 martsa 2021
Iray amin'ireo lalao WrestleMania ara-batana indrindra tamin'ny fotoana rehetra io. Samy nampiasa ny fampiasana tsara indrindra ny fepetra takelaka No Holds Barred na ny Superstars roa tonta satria mifanaintaina. Nandray anjara tamin'ny lalao ihany koa i Shawn Michaels mba hanampiana ny sakaizany.
Ny fotoana farany niadiana dia nahitana an'i Triple H namely an'i Lesnar niaraka tamin'ny razambeny iray tamin'ny dingana vy hahazoana ny fandresena. Iray amin'ireo fatiantoka nahagaga indrindra tamin'ny asan'ny fikomiana nataon'i Lesnar ary nanimba ny fahatokisana ny toetrany nandritra ny fotoana kelikely.
Mpandresy: Triple H
tsapako fa tsy dia tsara loatra ho an'ny sipako aho
# 7 Brock Lesnar vs. The Undertaker: WrestleMania 30
Tapaka nahatsiravina ny sain'ny Undertaker's WrestleMania
Tao amin'ny WrestleMania 30, niady tamin'i The Undertaker i Brock Lesnar tamina fifandonana nandritra ny taona maro. Talohan'ny fifaninanana dia nilaza i Lesnar fa hanao izay tsy eritreretina izy amin'ny alàlan'ny fandresena ny soritra masin'ny The Deadman.
Toa tsy nino an'i Lesnar ny Unity WWE tamin'izay. Nihevitra izy ireo fa i Lesnar no Superstar manaraka tsy mahomby amin'ny The Undertaker ao amin'ny Showcase of Immortals. Na izany aza, WWE dia nanomana drafitra hafa ho an'io alina io.
Taorian'ny 20 plus minitra ny herisetra, Brock Lesnar dia nanatanteraka F5 fahatelo tamin'i Undertaker. Nandeha haingana nitady ilay fonony izy ary nametaka tamim-pahombiazana ny The Deadman tamin'ny isa telo, ka gaga ny rehetra.
Nanjary taitra tampoka ny kianja Superdome iray manontolo rehefa nipaipaika fanindroany ny mpitsara ny mpitsara. Azo inoana fa io no fotoana nahagaga indrindra tamin'ny WrestleMania tamin'ny fotoana rehetra. Taorian'ny fandresena 21 WrestleMania dia resy ihany i Undertaker tamin'ny The Grandest Stage of They All.
Ny fihetsika nanoloana ny @BrockLesnar manapaka ny dingana nandresen'i Undertaker (21-0) tamin'ny # WrestleMania30 pic.twitter.com/nYGYTeZAQo
- ESPN (@espn) 23 martsa 2020
Io fandresena ny The Phenom io dia nametraka an'i Brock Lesnar ho hery matanjaka indrindra tamin'ny WWE. Izy io koa dia nanjary fisongadinana tonga lafatra tamin'ny asany tolona, ​​satria izy no WWE Superstar voalohany nandresy an'i The Undertaker tao WrestleMania.
inona no dikan'ny hoe mandainga amin'ny tsy fanarahana
Mpandresy: Brock Lesnar
ny vadiko tsy mieritreritra hoe tiako izy
ny vadiko tsy matoky ahy
ahoana ny mieritreritra alohan'ny hitenenako
inona no hevitra ny amin'ny
mamela vady ho an'ny vehivavy hafa manenina